Iimali zedijithali ezitsha ngokutsha ngo-2020 EyoMsintsi 2020.
Iimali ezili-10 eziphambili zeedigrikhi zedijithali eziye zavela kwiimarike zemali zedijithali kwimihla yamva.
Iimali zedijithali ezitsha kwi EyoMsintsi 2020
Hatch DAO (HATCH) 20/09/2020
New BitShares (NBS) 20/09/2020
Exchange Payment Coin (EXCHANGEPAYMENTCOIN) 19/09/2020
Bridge Oracle (BRG) 19/09/2020
UpBots (UBXT) 19/09/2020
Permission Coin (ASK) 19/09/2020
Linear (LINEAR) 19/09/2020
HodlTree (HTRE) 19/09/2020
Diagon (DIAGON) 19/09/2020
Add.xyz (ADDXYZ) 19/09/2020
VirgoX Token (VXT) 19/09/2020
Resoper (RSP) 19/09/2020
01coin (ZOC) 19/09/2020
ETF Dao (ETFDAO) 19/09/2020
Percent (PCT) 19/09/2020
Unisocks (SOCKS) 19/09/2020
ChartEx (CHART) 19/09/2020
Oracle System (ORACLESYSTEM) 19/09/2020
Gala (gala) 18/09/2020
Xplosive Ethereum (XETH) 18/09/2020
3X Long Sushi Token (SUSHIBULL) 18/09/2020
3X Short Sushi Token (SUSHIBEAR) 18/09/2020
Printer.Finance (PRINT) 18/09/2020
YFMoonshot (YFMS) 18/09/2020
dHedge DAO (DHT) 18/09/2020
Walletreum (WALT) 18/09/2020
Dego Finance (DEGO) 18/09/2020
StarCurve (XSTAR) 18/09/2020
Uniswap (UNISWAP) 18/09/2020
I-imali yedatha entsha yinkonzo ye-intanethi ye-cryptoratesxe.com, epapasha uluhlu lwee-imali yedatha ezisandula ukubonakala, kodwa zirhwetywe ngotshintshiselwano nge-crypto.
Inkonzo entsha "ye-imali yedatha" ekwi-intanethi isebenzisa imithombo evulekileyo yokutshintshiselana nge-imali yedatha kwaye iqokelela umlinganiso we-crypto entsha ngexesha lokwenyani.
Sichaza i-imali yedatha entsha njengemali eyakhiwe kwisiseko semigaqo-siseko yedijithali, kodwa engazange ivele kurhwebo lotshintshiselwano.
I-Imali yedatha ihlala ivela, kodwa iqala ukujikeleza phakathi kwabantu xa ukuthengiselana kuqalile ukwenzeka. Ukususela kumzuzu wokurhweba isibini sokuqala sokurhweba, sibhalisa i-imali yedatha entsha kwaye siyipapashe kuluhlu lwee-imali yedatha ezintsha.
Ngokungafaniyo "Imali yedijithali yakutsha" inkonzo, ebonisa amaxabiso eendleko zemali enye esanda kuvela i-imali yedatha, Imali engabizi kakhulu yedijithali inkonzo ibonisa iindleko zazo zonke ii-cryptocurrensets ezikhoyo ngexabiso elincinci.
I-imali yedatha entsha, nakwiseshoni yokuqala yokurhweba, isenokungabi yeyona nto ibiza imali iphantsi.
Uluhlu lwee-imali yedatha zamanje zihlala zitshintsha. Ukubonakala kwe-crypto entsha kwenzeka kanye ngemini okanye kube kanye ngeveki okanye kube kanye ngenyanga.
Sebenzisa inkonzo yethu "entsha imali yedatha" kwi-intanethi kwaye simahla!
Eyona nto intsha ye-imali yedatha ye EyoMsintsi 2020 njenge 21/09/2020 zimelwe lukhetho lwee-cryptos ezintsha ezili-10 ngohlobo lokuhlengahlengisa ukusuka kolona lutsha ngokokuhamba kweminyaka.
Ubuninzi be-crypto bunikezelwa ngendlela yomhla wokuqala wokurhweba kwale mali nakuphi na ukutshintshiselana nge-imali yedatha emhlabeni.
Uluhlu lwee-cryptocurrensets ezintsha zibonakaliswa namhlanje EyoMsintsi 2020.
Kungenzeka ukuba ngomso i-imali yedatha entsha ivele kwaye umlinganiso wee-imali yedatha ezintsha ziya kwahluka ngomso.
Rhoqo ndityelele iwebhusayithi yethu yolwazi oluphezulu malunga ne-imali yedatha entsha kwinkonzo ye-imali yedatha entsha yanamhlanje.
Iimali zedijithali ezitsha kwi 2020
Eyona nto intsha 2020 zii-imali yedatha ezivele kuphela 2020.
I-imali yedatha entsha ivela rhoqo. Ngamanye amaxesha ii-imali yedatha ezintsha zinokuvela ngemini enye. Kodwa uphawu oluchanekileyo lolokuba le krokheyishini iyathengiswa kwaye isebenza kangakanani.
Kutheni le nto sifuna i-imali yedatha entsha engathengwanga kwaye ithengiswayo, engafuneki mntu?
Sichaza i-imali yedatha entsha ye 2020 njengemali engazange ibekho 2019, kwaye ngaphakathi 2020 yarhweba ngokutshintshiselana ubuncinci kube kanye.
Sithatha usuku lokuzalwa lwe-cryptocur lwemali njengosuku eyaqala ukuthengiswa ngalo kwi-imali yedatha exchange.
Ukuba ngaphakathi 2020 kwakungekho zibini zorhwebo nge-crypto kulo naluphi na utshintshiselwano kwihlabathi, emva koko asibandakanyi i-crypto ngoluhlu lwee-imali yedatha ezintsha kwi 2020.
I-imali yedatha entsha
I-imali yedatha entsha yi-crypto, engazange ithengiswe kutshintshiselwano, kodwa urhwebo kuyo iye yabanjwa okungenani kube kanye.
Abatyalomali abaninzi bazama ukufumana ii-imali yedatha ezintsha. Iimpawu zorhwebo zee-imali yedatha ezintsha zihlala zisebenza kakhulu. Ukuba ujoyina i-auction ye-crypto entsha, ke unako ukuphatha ukuthenga i-crypto ngexabiso eliphantsi kakhulu. Kuyenzeka ukuba umyinge we-imali yedatha entsha ukhula ngokukhutheleyo.
Abatyalomali abasebenza kunye ne-imali yedatha entsha ngamanye amaxesha bafumana inzuzo eyongezelelweyo. Kodwa umngcipheko wokutyala imali kwi-imali yedatha entsha nawo uphezulu.
Kubalulekile ukuba ube ngowokuqala ukufumana ukuba imali entsha ivele kurhwebo lwe-crypto.
Kule nto, inkonzo yethu kwi-Intanethi "entsha ye-imali yedatha" yenziwa. Sebenzisa inkonzo entsha ye-imali yedatha isimahla.
Uluhlu lwee-imali yedatha ezintsha
Itheyibhile yee-imali yedatha yamva nje yifom yedatha yoluhlu lwethu lwee-imali yedatha ezintsha.
Itheyibhile ye-crypto entsha ibonisa igama le-imali yedatha kunye nomhla wentengiso yazo yokuqala.
Xa ucofa enye yezona mali zangoku zibambekayo kule tafile, uya kuthunyelwa kwiphepha lolwazi elineenkcukacha ngale imali yedatha intsha.
Itshathi ye-imali yedatha entsha
Itshathi yamanje ye-imali yedatha sesinye isixhobo simahla kwi-intanethi esibonisa uluhlu kunye neendleko zee-imali yedatha ezintsha.
Igrafu ye-cryptocurrensets entsha ibonisa inqanaba le-10 ephezulu ye-crypto ngokweziphumo zokurhweba kwiitransekshini zemali.